कांग्रेस र एमालेले चाहँदा जे हुन सक्थ्यो, त्यही संविधान आएको हो
संविधानकाे ४ वर्ष
प्रदीप बस्नेत काठमाडाैं, ६ असाेज
संवैधानिक अभ्यास प्रारम्भ भएको सात दशकमा नेपाल सातौं संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । ३ असोज २०७२ मा जारी संविधान कार्यान्वयनका क्रममा मुलुकले ठूलठूला चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । एकातिर, मधेसमा संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । अर्कोतिर, नयाँ संविधानअनुसार कार्यान्वयनमा आइसकेका संरचना प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि असन्तुष्टि सम्बोधन नहुनु र नयाँ संरचना प्रभावकारी हुन नसक्नुले ‘समृद्धि हुँदै समाजवाद’को बाटोमा लम्किने नेपाली आकांक्षामा कस्तो असर पर्छ, धेरैमा यस्तो जिज्ञासा छ । यसै सन्दर्भमा संविधान, यसको कार्यान्यवन र चुनौतीलगायतका विषयमा संविधानसभा भाग १ र भाग २ मा रहेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागीमध्येका एक राधेश्याम अधिकारी (हाल राष्ट्रियसभा सदस्य)सँग गरिएकाे कुराकानी ः
संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा हुँदा पनि यसको स्वीकार्यता बढाउन सकिएको छैन । संविधान जारी हुँदा के भएको थियो ?
पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन माओवादीको जबर्जस्त उपस्थिति भयो । त्यो बेला मूलधारका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलाउँदा पनि एकतिहाइ मुश्किलले पुगेको थियो । दुईवटा मिलेपछि पास गर्दैनौं भन्दा पास नहुने अवस्था त थियो । तर, यसका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नैपर्ने थियो । अर्कोतिर, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलको ठूलो संख्यामा उपस्थिति थियो ।
माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उठाएका मुद्दाहरू जतिसक्यो, नयाँ संविधानमा परून् भन्ने चाहना राख्थ्यो, जुन स्वभाविक पनि हो । सत्ता भनेको सरकार मात्रै होइन, मूलतः सत्ता भनेको नेपाली सेना र न्यायालयलाई नभत्काईकन आफूहरूको चाहना पूरा हुँदैन भन्ने उनीहरूको स्पष्ट बुझाइ थियो ।
यो कुरा उनीहरूले खुलेरै गर्थे । म कानुन तथा न्याय समितिमा हुँदा एउटा स्मरण छ, संसदको अधीनमा अदालत राख्ने कुरालाई उनीहरूले पास गरे ।
दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस र एमालेले चाहँदा जे हुन सक्थ्यो, त्यही परिस्थितिमा यो संविधान आएको हो । संविधान जारी हुँदा मधेसकेन्द्रित दलहरूको ठूलो असहमति थियो ।
संख्यात्मक रूपमा सानो समूह भए पनि राप्रपा र अहिलेको राजपाले संविधानका केही विषयमाथि आपत्ति जनाइरहेका थिए । चित्रबहादुर केसीको पार्टी राजमोले त संघीयता नै चाहिँदैन भनिरहेको थियो । यी सबका बाबजुद संविधान बनाउने तयारी भयो ।
निकै चुनौतीका बीच नयाँ संविधान आयो । तपाईंलाई थाहा नै छ, मधेसीहरूले अस्वीकार गरे । हिन्दुस्तानको नाकाबन्दी भयो । संविधान सबैको सहमतिमा जारी गर्ने प्रयास असफल भएकै हो ।
संविधान केही नेताहरूले मात्रै लेखे, यसमा संविधानसभा सदस्यहरूको योगदान नै छैन । दलका नेताहरूले जे भने त्यसरी नै संविधान आयो । संविधानसभाले आफ्नो सार्वभौमिकता प्रयोग गर्न पाएन भनेर तर्क गर्छन् । यो सरासर गलत हो ।
विभिन्न विषयगत समितिका रिपोर्टहरू हेर्दा पनि प्रशस्त छलफल र सहभागिता भएको पाइन्छ । अन्तिम चरणमा गएर पूरै संविधानसभाको ६ सय १ को हाउसमा फेरि एक/एक दफा छलफल हुनुपर्थ्यो । त्योचाहिँ भएन ।
आदिवासी जनजाति, मधेसीहरूको असहमतिका बीच संविधान जारी भएको हो । तपाईंले भन्नुभयो कि संविधानसभा सदस्यहरूको समेत योगदान संविधानमा छैन । त्यसो भए त्यतिबेला ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतृत्वबीच के सहमति भएको थियो ?
यी तीन नेताका बीचमा सहमति भएरै संविधान जारी भएको हो । संविधान जारी हुनुमा तीन नेताको उत्तिकै भूमिका छ ।
अझ नेपाली कांग्रेसले नचाहेको भए संविधान जारी हुँदैनथ्यो । किनभने, कांग्रेससँग आफैंमा एकतिहाइ सिट थियो । यसअर्थमा सुशील कोइराला र नेपाली कांग्रेसको अलि बढी नै भूमिका भएको हो । यसमा अन्य दलले पनि साथ दिएका हुन् । आदिवासी र मधेसीले चाहेको नै के हो भन्ने बुझिन्न ।
कतिपयलाई यो संविधानमा गणतन्त्र मन परेको छैन । कतिपयलाई हिन्दु राष्ट्र र संघीयता मन परेको छैन । मधेसीलाई पनि यी तीनै कुरा मन नपरेको हो त ? भनेर सोध्दा टाउको हल्लाउँदैनन् । मधेसीलाई लोकतन्त्र मन नपरेको हो त ? भनेर सोध्दा पनि उनीहरू टाउको हल्लाउँदैनन् । हो के त भन्दा मधेसी र आदिवासीहरूले मागेको जति पूरा भएन । यो त बढाउँदै लैजान सकिन्छ ।
आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सी संशोधन गरेर संविधानलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । जनमतलाई आफ्नो पक्षमा ढाल्दै संशोधनमार्फत आफ्ना माग पूरा गराउन त संविधानले रोकेको छैन ।
यो गतिशील दस्तावेज हो । उहाँहरू छलफलमा कस्सिएर सहभागी हुनुभएको हो । अन्तिममा विचारमा त हारजित हुन्छ नै । आफ्नो मतका आधारमा हारजितको टुंगो लगाउन खोज्दा उहाँहरूले फरक मत राख्नुभएको हो ।
आज पनि मधेसी दलहरूले संविधान पेलेर ल्याइयो भन्छन् । अलिकति पछि सारेर सबैको सहमतिमा ल्याऔं भन्दा मानिएन । स्वयम् त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि केही पर सारेर मधेसीलाई पनि सहमति गराउने पक्षमा थिए भन्ने छ । त्यसबेला भएको के थियो ?
कुरा त्यसो होइन । अलि ६/७ दिन ढिला पनि हुन सक्थ्यो । संविधान छिट्टो जारी गराउनमा हिन्दुस्तानको हात छ । हिन्दुस्तानबाट मोदीका दूत बनेर जयशंकर आए र संविधानसभाबाट पास नगर्नुस् भनेर दबाब दिएपछि सबै पार्टीका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएका हुन् । यो हाम्रो विषय हो । संविधान सभाको विषय हो भन्ने भएपछि संविधान जारी गर्ने वातावरण बन्यो ।
देखिने गरेर हिन्दुस्तानले दबाब दिएपछि अहिले नै संविधान बनाइएन भने कहिल्यै बन्दैन भन्ने नेताहरूलाई लागेको हो । हरेक छलफलमा मधेसी, जनजाति सबैलाई सम्मानजनक ढंगले अवसर दिएको मै साक्षी छु । म पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभामा थिएँ । मेरो शौभाग्य, म टेक्निकल टिममा बसेर काम गर्न पाएँ । जुन टिमको अध्यक्ष प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो ।
प्रचण्डजी, रामचन्द्र पौडेलजी, माधव नेपालजी बसेको टिममा म सधैं साक्षी छु । इतिहास साक्षी छ । मधेशका साथीहरूको कुरा सुन्न, उहाँहरूको कुरा भन्न कतै कन्जुस्याइँ गरेको छैन ।
लक्ष्मणलाल कर्ण भेट्रान लयर पनि हो । उहाँ, म, सपना मल्ल प्रधान, अग्नि खरेलको टिमले मुख्य नेताहरूसँग बसेर सधैंभरि राजनीतिक समाधानका लागि काम गरेका हौं । यो तर्क मधेसी दलले गर्नु भनेको राजनीतिक बेइमानी हो ।
यो तर्क किन बलियो छ भने तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई जो संवाद समितिको पनि सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि केही समय पर सारेर सबैको सहमति निर्माणमा लागौं भनेर मैले प्रचण्डजीलाई पनि भनेको हुँ । सुशील कोइरालालाई पनि भनेको भनेर बोलिरहनुभएको छ नि ?
बाबुरामजीजस्तो मान्छेले बुझ्नुपर्छ कि उहाँले पार्टीलाई मनाउन सक्नुपथ्र्यो । कि प्रचण्डलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नुपथ्र्यो । नत्र उहाँको एक्लो कुुराले के अर्थ राख्छ ? बाबुरामजीको पनि संविधानमा त हस्ताक्षर छ नि । उसो भए किन हस्ताक्षर गरेको त ? नोट अफ डिसेन्ट लेखेको भएको हुन्थ्यो ।
उहाँको सिंगो पार्टीले साथ दिएको छ । उहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ । पास गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्छ । अनि मैले अहिले यसो भन्याथें भनेर हुन्छ ? मलाई पनि प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्न नपाएकोमा पटक्कै चित्त बुझेको छैन । तपाईं प्रक्रियामा सहभागी भइसकेपछि इन्कार गर्न पाउनुहुन्न ।
त्यति बेलाका प्रमुख तीन नेताले मधेसलाई सम्बोधन गर्न बाँकी छ । हामी त्यसलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्छौं भनेको त हो नि ?
संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढीको मतले संविधान जारी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, प्रचण्ड र अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले संविधान गतिशील दस्तावेज हो भनेर स्वीकार गरेको कुरा सत्य हो ।
यो संविधानमा जुन कुरा अपूरो भएको छ, त्यसलाई संवादमार्फत असन्तुष्टिलाई इन्गेज गरेर मिलाउँदै लैजान्छौं भनेको हो । त्यसैको सिलसिलामा पहिलो संशोधन भएको पनि हो । पछि त्यो रोकियो, जुन ठीक होइन । संविधानमा सबैले भनेबमोजिमको संशोधन हुँदैन तर संवाद त रोकिनु भएन ।
अहिले संवाद रोकिएको छ, यो गलत भयो । न्यायपालिकामा संवैधानिक बेन्च छ । संवैधानिक अदालत नै चाहिन्छ भन्ने मत थियो । तर, बेन्चले नै पुग्छ भन्ने भएपछि त्यो बनाइएन । यसबारेमा फेरि पनि चर्चा चल्छ भने संवाद गर्न सकिन्छ ।
संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्छ कि पर्दैन म भन्दिनँ । तर, कुरै गर्न पाइँदैन भन्नेचाहिँ होइन । संविधानमा सुरूका दिनमा थुप्रै पटक संशोधन हुन सक्छ । जस्तो भारतमा सयभन्दा धेरै पटक संशोधन भएको छ । अमेरिकामा अघिल्लो १० वर्षमा जति संशोधन गरे अहिले उनीहरूले संशोधन गर्नुपरेको छैन ।
संविधानलाई गतिशील बनाउन संशोधन आवश्यक हुन्छ । संविधानलाई पुनरवलोकन गर्न कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म कमिटी राख्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव पनि दिएका थियौं ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ आवश्यक परेको बेलामा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दुःखद हो । प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोल्नु हुँदैन । उहाँले त ठाउँ राखेर बोल्नुपर्छ । मानिसलाई संविधान संशोधनबारे ठूलो चासो छ । कन्टेट तपाईंले अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ तर संवाद जारी राख्नुपर्छ । तर, यहाँ त संवाद गर्ने थलो नै भएन ।
असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद किन टुट्यो होला ?
यो हटिपना हो । यो राम्रो भएन । तपाईंका पाँचओटा मागमध्ये एउटा पूरा गर्दा मेरो यति माग त पूरा भयो भनेर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । अरु माग पूरा गर्न राजनीतिक गतिविधिमा इन्गेज हुनुहुन्छ । तर, यसको आवश्यक नै छैन भनेर इन्कार गरेपछि तपार्इंका पाँचवटै माग बाँकी रहे ।
तपाईं प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु भएन । यसरी संवादको बाटो बन्द हुने गरी प्रधानमन्त्री बोल्नु हुँदैन । सरकार यति धेरै रियाक्टिभ हुन मिल्छ ? त्यस कारण कन्टेन्टमा तपाईं सबै कुरा स्वीकार गर्न सक्नु हुन्न तर संवाद नै गर्न हुन्न भन्नेचाहिँ छैन ।
यो चार वर्षमा अभ्यासको अनुभव कस्तो देखियो ?
हामी संविधान बनाउँदा पेचिलो अवस्थामा थियौं । सञ्चार प्रविधिको उपयोगले हरेक व्यक्तिले आफ्ना माग र मुद्दाहरू उठाउँदा हामीले धान्न नसक्ने कुरा पनि संविधानमा राखेका छौं । नागरिकले पाउने भन्या के ? संविधान र नागरिकको सम्बन्ध जोड्ने भनेको मौलिक हकले हो ।
तर, आज मौलिक हक मौलिक अधिकार नै रहेनन् । जस्तो रोजगारी, शिक्षा, आवासको हक मौलिक हकमा राखिएको छ । तर, मुलुकभरिको माध्यमिक शिक्षालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार हामीले दिएका छौं त ? यो ठूलो प्रश्न हो ।
रोजगारको ग्यारेन्टी गर्यौं तर आज रोजगारीको अवस्था के छ ? यस कारण नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकार र यसको उपभोगमा हेर्दा यो नेगेटिभ इन्डेक्समा छ । संघीयताको मुख्य एप्रोच नै देखिएन । सत्तारुढ दलको माइन्डसेट उल्टो देखिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहहरू आक्रोशित छन् । संविधानले कल्पना गरेको अधिकार पनि हामीले पाएनौं भन्ने उनीहरूको ठूलो गुनासो छ । उनीहरू पनि निर्वाचित हुन् । अधिकार ज्यादै केन्द्रीकरण भयो भन्ने गुनासो छ ।
त्यहाँ पनि सरकार छ । प्रदेशले आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने भनेको छ । तर, सीडीओ गृह मन्त्रालयले चलाइरहेको छ । सीडीओ त्यहाँको आन्तरिक मन्त्री भन्दा शक्तिशाली छ । त्यसैगरी संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाइएको छ ।
यसमा मधेसी दलको ठूलो योगदान छ । कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार हामीलाई नै चाहिन्छ भन्ने माग भएका कारण प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाइएको हो । तर, अहिले संघीय लोकसेवा आयोगले दशौं हजार कर्मचारी माग गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउँदै छ । यस किसिमको धारणा बोकेर संघीयता चल्दैन ।
संविधानको तीन सरकारले राज्यको एप्रोचलाई जनताको बीचमा पुर्याएका छन् ?
हामीले धेरै आत्तिनु पनि भएन । स्थानीय दुई वर्ष, प्रदेश दुई वर्ष पुग्दैछ भने संघीय सरकार करिब डेढ वर्षमा छ । यसका बाबजुद पनि स्थानीय र प्रदेशले संघप्रति गरिरहेको गुनासो पनि सिंहदरबारले सुनिरहेको छैन । जनतासँगको एप्रोचको कुरा गर्दा प्राज्ञिक रूपमा हेरिएको छैन ।
संविधान जारी भइसकेपछि यसको कार्यान्वयन र यसको स्वीकार्यता बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्ता पाइएका छन् ?
संविधानसभाबाट बनाएका वा जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हेर्दा फरक देखिन्छ । जस्तो अमेरिकी संविधान सानो छ तर त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या असीमित छ । संविधानलाई व्याख्या गर्दै समृद्ध बनाउने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो ।
हिन्दुस्तानमा पनि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै स्वीकार्यरता बढाएको हो । तर, अदालतको विश्वनीयता भने गुम्नु हुँदैन । हाम्रो अदालतको सबैभन्दा ठूलो भूमिका अहिले आएको छ । यो सामान्य घरझगडाको विवाद जस्तो होइन ।
अदालतले कति विश्वनीय तरिकाले काम गर्छ ? उसले गरेका व्याख्यालाई जनताले स्वामित्व लिन्छन् कि लिँदैनन् ? राजनीतिक दलले अदालतलाई कति साथ दिन्छन् ? वा अदालत आफैंले त्यो विश्वनीयता र सबैलाई न्यायको प्रत्याभूति दिन सक्छ कि सक्दैन ? यो अदालतको पनि परीक्षाको घडी हो ।
आज चार वर्षसम्म पनि कालो दिवस मनाउने राजनीतिक पार्टी छ । त्यही पार्टीका नेताहरू मधेश अलग पनि हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । अर्कोतिर मुलुकमा ठूलो विद्रोहको वातावरण बन्दै छ भनेर स्वयम् कांग्रेसका नेताहरू पनि बोलिरहेको सुनिन्छ । यो के हो ?
मान्छेलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ । मानिसलाई आन्दोलन गर्ने पनि यही संविधानले नै दिएको हो । ल ठीकै छ । यो प्रक्रियालाई भत्काऔं । यो संविधान पनि फालौं । तर फेरि पनि बनाउनुपर्ने यही संविधान नै होला । फेरि पनि यही लोकतान्त्रिक संविधान नै बनाउने होला ।
संविधानका अन्तरवस्तु यही नै हुने होलान् । यही नै संविधान बनाउने हो भने फेरि पनि किन ठूलो आन्दोलन चाहियो ? आवश्यक कुरा संशोधनका लागि पहल गर्न सकिँदैन र ? सरकारले संवाद गर्नैपर्छ । सरकार चुप लागेर बस्दा दुर्घटना हुन सक्छ । संवादमा बस्नेबित्तिकै मागहरू छुट्टिदै जान्छन् । के जायज के नाजायज भन्ने जनताले पनि बुझ्दै जान्छन् । संवाद नै टुट्नु दुर्भाग्य हो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ६, २०७६, २२:५२:००
कांग्रेस नेताको प्रश्नःभएन भनेर राणा फाल्यौं, पञ्चायत फाल्यौं, राजा फाल्यौं अब पनि भएन भने के फाल्ने
पार्टीभित्रको पेटी ठेकेदारी प्रथा अन्त्य हुनुपर्छः महेश वस्नेत
'भारतले ३ सय वर्ग किलोमिटर जग्गा मिचेको छ'
राप्रपा एकता हिन्दु राष्ट्र र आलङ्कारिक राजसंस्थाका लागि हो